गाडीमा यात्रा गर्दा कसैलाई किन बान्ता आउछ ? रोक्न यसो गर्नुहोस्
डिसेम्बर 31, 2018 अक्टोबर 3, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments गाडी, बन्ता
गाडीमा यात्रा गर्दा बान्ता आउछ ? कोहिकोहि मानिसलाई बसमा यात्रा गर्दा बन्ता वा उल्टी आउने समस्याले हैरान पारेको हुन्छ । बसमा यात्रा गर्दा बान्ता आउने, टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने भयो भने यात्रा असहज हुन्छ । यसलाई मोसन सिकनेस भनिन्छ । यसले लामो समय असर गर्दैन । दिमाग र शरीरबीच तालमेल नहुँदा मोसन सिकनेस हुन्छ । यो पाँचदेखि १२ वर्षका बच्चा, महिला र बुढापाकालाई बढी हुन्छ । मोसन सिकनेस शरीरका इन्द्रियहरूको सन्तुलनसँग सम्बन्धित छ । जब कान, आँखा र शरीरले गति अथवा चहलपहल सम्बन्धी सूचनालाई विरोधाभाषपूर्ण ढंगले हाम्रो दिमागमा प्रवाह गर्छ, तब मोसन सिकनेस हुन्छ । हाम्रो शरीर गतिमा छ भने भित्री कान (लेबिरिन्थ) ले थाहा पाउँछ तर, शरीरका अरु भागले त्यो थाहा नपाउँदा फरक फरक सूचना हाम्रो मस्तिष्कमा पुग्छ ।
हाम्रो कानभित्र तीनवटा अर्धवृत्ताकार नलीहरू हुन्छन् । ती नलीहरू सामान्यतया एक आपसमा समकोण परेर बसेका हुन्छन्, जुन चालसित सम्बन्धित हुन्छन् र चालको सूचना यिनै नली मार्फत मस्तिष्कको भेस्टिबुलर न्युक्लियसमा पुग्दछ । केही-कोही मानिसहरूमा ज्यादै नै संवेदनशील भेस्टिबुलर स्नायूहरू हुन्छन् । त्यस्ता मानिसहरू लगातार कुनै चलिरहेको गाडीमा बस्दा उनीहरूको मस्तिष्कको भेस्टिबुलर न्युक्लियस नजिकै भेगस न्युक्लिइ भन्ने स्नायुकेन्द्र पर्दछ । भेगस स्नायु उत्तेजित हुँदा सामान्यतया वाकवाकी लाग्ने र वान्ता हुने गर्दछ ।
गायक गायिकाको स्वर सुरिलो हुने कारणहरु
← जाडोमा यसरी गर्नुस् शिशुहरुको हेरचाह
गायत्री मन्त्र जप्दा स्वास्थ्यमा हुने फाइदाहरु →
फ्रेवुअरी 20, 2017 फ्रेवुअरी 26, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2